1 uhlelo lokusebenza lokuphola
Izindawo ezi-15 Zokuqomisana ezihamba phambili nezinhlelo zokusebenza ngo-2021: Uhlu Lwamapulatifomu Okuqomisana Okuphezulu Kwe-inthanethi Ngohlobo
Amasayithi wokujola nezinhlelo zokusebenza ziningi kulezi zinsuku futhi ukubuza umuntu ngesayithi labo eliyintandokazi kuzokhipha impendulo ehlukile njengomuntu uqobo.
Ngenkathi abanye abantu kungenzeka ukuthi bafuna uthando nomshado, abanye kungenzeka ukuthi bafuna okuthile okungajwayelekile.
Amasayithi wokuphola amahle kakhulu ahlinzeka ngokuhlukahluka okuningi nobumfihlo, phakathi kwezinye izici. Le ndatshana ihlose ukubeka isayithi lokuphola elihamba phambili lezimo ezihlukile zomuntu ngamunye nezinhloso zobudlelwano.
Kuhle kakhulu ebudlelwaneni obunzima - i- Eharmony
Kuhle kakhulu kochwepheshe abasebenza - i- EliteSingles
Isayithi lokuqomisana lamahhala kakhulu - i- Okcupid
Indawo engcono kakhulu yokuphola - i- AdultFriendFinder
Uhlelo lokusebenza olukhulu kakhulu lokuphola - iTinder
Isayithi lokuqomisana eliphakeme kakhulu - iSilverSingles
Uhlelo oluhamba phambili lokufanisa ubuntu - iHinge
Okuhamba phambili kwamaculo angama-christian - ChristianMingle
Isayithi lokuqomisana elihamba phambili - AshleyMadison
Uhlelo lokusebenza lokuphola oluhamba phambili lwabesifazane - iBumble
Abesifazane abaningi kunabesilisa - Ukufuna
Isayithi lokujola elibucayi labangaphansi kweminyaka engama-30 - Zoosk
Ahlolwe Kanjani Amasayithi Okuphola Ahamba Phambili:
Ukubuyekezwa komsebenzisi - Esizeni ngasinye sokuphola sibheke izibuyekezo zesitolo sohlelo lokusebenza, izingxoxo zesithangami, kanye nezibuyekezo ze-trustpilot ukuthola amasayithi anesilinganiso esiphakeme kunazo zonke esigabeni esinikeziwe.
Ubumfihlo nokuvikeleka - Wonke umuntu uzwile izindaba ezethusayo zamadethi aku-inthanethi sezimuncu noma ziyingozi. Amasayithi wokuphola amahle kakhulu afaka izici zobumfihlo ezakhelwe ngaphakathi futhi ngisho nabomengameli ukungena lapho umsebenzisi engekho emgqeni noma edala ingozi kwabanye.
Izici ezihlukile - Amanye amawebhusayithi wokuphola avele anikeze izinketho zokuhlangana ngqo, noma ngabe kungxoxo noma ngekholi yevidiyo. Abanye basiza abantu ukuthola ukufana kwabo nemidlalo yokuhambisana, izinketho zokuhlunga, nokuningi. Lezi zici ezingeziwe zikhombisa ithuba elingcono empumelelweni.
Izindawo ezi-15 Zokuqomisana ezihamba phambili ze-2021
1. I- Eharmony - Kuhle kakhulu ebudlelwaneni obunzima
Izigidi zemibhangqwana zixhunywe yi-Eharmony-empeleni, abasebenzisi abangama-400 + bashada nomuntu abahlangana naye kuwebhusayithi nsuku zonke. Ipulatifomu selizuze nemiklomelo njengesiza esihle kakhulu sokuthola ubudlelwano obuzinzile.
I-Eharmony idinga ukuthi abasebenzisi baqedele inhlolovo ende lapho bebhalisa, esebenza "njengohlelo lokufanisa ukuhambisana." Isayithi bese lisebenzisa lolu lwazi ukwethula abasebenzisi ngokukhetha okungaba yimpumelelo kwezothando.
Le ndlela eqhutshwa yidatha, ekhethiwe iyisizathu sokuthi i-Eharmony iyindlela enhle kakhulu kunoma ngubani ofuna ubuhlobo besikhathi eside.
2. Ama-Singles angama-Elite - Ahamba phambili kubasebenzi abasebenzayo
Ubulungu be-Elite Singles buqeqeshwe kakhulu, okwenza kube inketho enhle kakhulu uma abasebenzisi befuna izingxoxo ezikhuthazayo. Cishe amaphesenti angama-85 ababambiqhaza baneziqu zemfundo ephakeme, kanti amaphesenti angama-90 angaphezulu kweminyaka engama-30. Lezi zibalo ziqinisa isipiliyoni sempilo kwisibalo sokuthandana.
Isayithi lifanisa abasebenzisi namanye ama-singles asebenzisa i-algorithm egxile kuzimpendulo zabo kuhlu lwemibuzo. Abantu ngokuyinhloko bayisebenzisela ukufuna ukusebenzisana kwesikhathi eside, kokubili ngaphakathi nakwamanye amazwe. Njengamanje iyasebenza emazweni angama-25.
3. AdultFriendFinder - Kuhle ngoba abaxhume
Leli sayithi alihloselwe noma ngubani ofuna ubudlelwano besikhathi eside. Inikeza ngezinketho ezimbili eziyinhloko: ukudlala ngothando (kuhlelo lokusebenza) noma ukuxhumana. Yilokho kuphela, futhi kwabanye abantu, yilokho kanye abakufunayo.
I-AFF, noma i-Adult Friend Finder, ifaka phakathi izinketho eziningi zokuxhumana, kufaka phakathi imiyalezo, ividiyo (“izinsuku eziku-inthanethi”), okuphakelayo bukhoma, nezingxoxo zomphakathi.
Ukubhalisa ngalolu hlelo lokusebenza kulula. Ngokungafani nezinye izingosi zokuphola ezidinga uhlu lwemibuzo, i-AFF iyigcina kwinqubo yokubhalisa yemizuzwana engama-30. Abasebenzisi bangaqala ukusesha ngokushesha.
4. SilverSingles - Kuhle abangashadile engaphezu kwengu-50
ISilverSingles sekuneminyaka engu-17 ikhona futhi ingenye yezinhlelo zokusebenza ezindala kakhulu zokuphola zabantu abaneminyaka engaphezu kwengama-50. Insiza iqinisekisa iphrofayili ngayinye, iqinisekisa ukuthi amakhasimende ayo angempela futhi aphephile.
Abasebenzisi bagcwalisa uhlu lwemibuzo oluningiliziwe lobuntu olubandakanya izinhlelo zabo zempilo, izinto eziza kuqala, isimo sabo, kanye neminye imininingwane, ukuze iwebhusayithi ikwazi ukuhlunga okufanayo.
Ipulatifomu itholakala ngewebhusayithi noma ngohlelo lokusebenza lweselula lapho ubulungu obuyisisekelo bumahhala khona.
5. Bumble - Inketho enhle yabesifazane
Ukuqhuma akujwayelekile phakathi kwezicelo zokuphola ngoba kunika amandla abesifazane ukuqala ukuxhumana. Abesilisa abakwazi ukuxhumana nemidlalo yabo yabesifazane ngaphandle kokuthi owesifazane axhumane naye kuqala. Lokhu kuvumela izintokazi ukuthi zihole kube kanye.
Ipulatifomu igxile ekuthintaneni ngokushesha. Abasebenzisi banamahora angama-24 wokuxhumana, futhi ngemuva kwalokho, umdlalo uyaphela. Lokhu kukhombisa ukuthi isiza senzelwe ukuqondanisa okuzenzakalelayo, kepha futhi kufanelekile kulabo abangathandi ukuchitha isikhathi esiningi bephequlula nxazonke.
Uhlelo lokusebenza luhlangana ngokukhululekile nezinkundla zokuxhumana ezifana ne-Facebook, Spotify, ne-Instagram, okuvumela abasebenzisi ukuthi babonise izici ezahlukahlukene zobuntu babo. Ama-akhawunti nawo aqinisekiswa ukusiza ukugwema amaphrofayli mbumbulu ukuthi angaveli kaningi.
6. Hinge - Ukuqamba uhlelo lokusebenza lokuqamba
Le nkampani ivule kabusha iHinge ngo-2016, futhi ingenye yezinhlelo zokusebenza zokuphola ezixoxwa kakhulu eminyakeni yamuva, kungenzeka kakhulu ngenxa yamazinga okuphumelela abasebenzisi bayo. Cishe amaphesenti angama-75 wabasebenzisi beHinge bakhetha ukuya osukwini lwesibili ngemuva kokuhlangana nemidlalo yabo.
Labo abanamaphrofayili we-Hinge nabo bangashiya izibuyekezo, ezisetshenziswa yisoftware ye-Hinge ukusiza ukucwenga ama-algorithms wabo wokufanisa ngokuzayo.
Ipulatifomu likaHinge liyathakazelisa ngoba likhuthaza abasebenzisi ukuthi bathande noma babeke amazwana engxenyeni ethile yephrofayili yomunye umuntu. Inikeza indlela yokuthi abantu bahlanganyele ngaphezu kwengxoxo ejwayelekile.
8. Ukufuna - Okwashukela baba kanye nabantwana abanoshukela
Ukufuna kuhlukile ngoba kugxile ekuxhumaniseni abantu abancane (izingane ezinoshukela) nabadala, abacebile oshukela kababa. Ngokusobala, kuvame kakhulu kunalokho okukholelwa abaningi, uma kunikezwa ukuthi ipulatifomu manje inababhalisile abangaphezu kwezigidi eziyi-10. Umuntu ngamunye angacacisa imigomo yakhe ngaphambi kokuxhuma, noma ngabe bafuna ukuhamba, bafuna isibonelelo, noma okunye ukucaciswa.
Kukhona isilinganiso esiphakeme sabesifazane kuya kwabesilisa, okusho ukuthi obaba banezinketho eziningi abangakhetha kuzo, yize kukhombisa nokuthi ukuncintisana kungaba nobudlova ezinganeni.
9. I- JDate - ama-singles angamaJuda kuphela
I-JDate iyisevisi yokuphola eyenzelwe abangashadile abangamaJuda kuphela. Yasungulwa ngo-1997 futhi manje isiyatholakala emazweni angaphezu kwekhulu, ivumela abasebenzisi ukuthi baxhumane nabangashadile abangamaJuda ngezilimi ezinhlanu ezihlukene (isiNgisi, isiHeberu, isiFulentshi, isiJalimane, neSpanishi).
Uma kukhulunywa ngemishado yamaJuda eku-inthanethi, i-JDate inesibopho sokufanisa amaphesenti angaphezu kwangu-50 aleyo mibhangqwana.
Abasebenzisi bangaxhumana nanoma ngubani onobulungu bamahhala noma obukhokhelwayo. Insizakalo yamakhasimende ihlola iphrofayili ngayinye ukuqinisekisa ukuthi idalwe ngamakhasimende angempela.
10. IChristianMingle - Isiza sobuKristu esingcono kakhulu
IChristianMingle isiza abasebenzisi abangaphakathi komphakathi wamakristu ngokuthola uthando lwabo laphakade. Inabasebenzisi abangaphezu kwesigidi esingu-1, futhi isayithi likhuthaza ngokusobala "ukuphola okusekelwe okholweni" ngamathuba esikhathi eside.
Kukhona inketho ye-akhawunti yamahhala noma ubulungu benyanga be- $ 29.95. Okokugcina kuza nesiqinisekiso, lapho umsebenzisi angathola khona izinyanga eziyisithupha mahhala ngemuva kokuba ubulungu babo bezinyanga eziyisithupha buphelile uma bengakutholi kufanelekile.
11. I- Zoosk - Umphakathi omkhulu wamazwe omhlaba
IZoosk inelinye lamapulatifomu amakhulu kunawo wonke emhlabeni jikelele, anamalungu angaphezu kwezigidi ezingama-40 emhlabeni jikelele. Usuku ngalunye, laba basebenzisi bahambisa imiyalezo engaphezu kwezigidi ezi-3 ngezilimi ezihlukene ezingama-25. I-Zoosk isebenza emazweni angaphezu kwama-80.
Le webhusayithi isebenzisa okuthile okubizwa ngokuthi "yi-behaviour matchmaking technology" ukusiza abangashadile ukuthola abantu abafanelekayo abangafana nomdlalo owenziwe ezulwini.
Ngemuva kwesikhathi sesilingo samahhala, ubulungu beZoosk bubiza u- $ 29.99 ngenyanga.
12. I- Reddit R4R - Ehamba phambili kubasebenzisi beReddit
I-R4R, noma i-Redditor ye-Redditor, i-subreddit enikezelwe ukuxhumanisa abasebenzisi. Ipulatifomu ayisebenzisi uhlelo olufanayo, kunalokho, iyindawo enkulu yezikhangiso zomuntu siqu.
Indlela yokusesha yomsebenzisi iletha imiphumela ayithandayo. Abasebenzisi beReddit bayisebenzisela ukuthola imisebenzi, abangane, amaqembu, ukuxhumana, kanye nobudlelwano besikhathi eside.
Noma kuyisithangami esivamile, kusenemithetho ephathelene nobudala, ubumfihlo, ukuba semthethweni nokuziphatha. Isibonelo, okuthunyelwe kwe-NSFW kuvunyelwe kepha kufanele kufakwe ilebula kanjalo ukuze abasebenzisi bakwazi ukunquma ukuthi bafuna ukubuka iposi noma cha.
13. OkCupid - Kumahhala futhi kuyathandwa
I-OkCupid ingenye yezindawo ezaziwa kakhulu zokuphola futhi inamaphrofayli abanzi amanye amalungu angawaskena kahle ngaphambi kokuxhuma. Itholakala kunguqulo yedeskithophu neselula, inemininingwane eminingi abasebenzisi abangayigcwalisela imiphumela emihle.
Isayithi lifaka kakhulu, elinokukhetha okungaphezu kobulili okungu-20 nobulili.
14. U- Ashley Madison - Indawo yokuqomisana ehamba phambili
U-Ashley Madison ungomunye wohlobo, olwenzelwe abantu abashadile abafuna ukuba nezindaba eziyimfihlo. Akuxhunyiwe kuma-akhawunti wezokuxhumana ngenxa yalesi sizathu.
Kuneminye imikhawulo yobumfihlo nezici zokusiza abasebenzisi ukuthi bahlale bengaziwa uma besaba ukubanjwa. Ngokwengeziwe, u-Ashley Madison unenketho yokuhamba lapho amalungu angasesha indawo yawo ezayo kusengaphambili.
I-Match.com - Umdlalo ubelokhu ukhona kusukela ngo-1995 futhi unikezela ngohlelo lomeluleki wokuphola ukuze usize ababambiqhaza kwimibono yokufanisa neyokuphola.
Tinder - Lolu hlelo lokusebenza lokuphola luthandwa kakhulu futhi luza ngokuthembeka. Iningi labantu liyisebenzisela ama-hookups, linikezwe isisekelo salo somsebenzisi esikhulu kanye nama-algorithms aqhutshwa indawo.
IBlackPeopleMeet - Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-18, iBlackPeopleMeet ibilokhu ixhuma ama-singles ase-Afrika aseMelika afuna uthando. Amalungu esayithi ayi-100,000 + angadlala ngothando, athumele i-imeyili, futhi abone ukuthi ngubani obuka iphrofayili yakhe.
I-Grindr - I-Grindr yenzelwe abantu be-LGBTQA + kuphela. Kususelwa endaweni, futhi abasebenzisi ngokuyinhloko bayisebenzisela ukuxhumana, yize ukufana kwesikhathi eside nakho kungenzeka.
Inala Yezinhlanzi - Le webhusayithi yokuphola isuselwe eCanada, kepha ivumela abasebenzisi ukuthi baxhumane nabantu abavela kuwo wonke umhlaba.
Kungani Abantu Basebenzisa Amasayithi Wokuphola Ku-inthanethi?
Amasayithi wokujola aveza abantu echibini elikhulu kakhulu labantu ukwedlula umuntu oyedwa abe nethuba lokuhlangana empilweni yangempela. Lokhu ikakhulukazi kubasebenzisi abaneqembu elilinganiselwe lomphakathi, abasha edolobheni, noma ngenye indlela.
Ukusebenzisa lawa masayithi kungavumela nabasebenzisi ukuthi bakhethe ngokwengeziwe ngokuya ngemigomo ebaluleke kakhulu kubo: amanani abiwe, izinto zokuzilibazisa, noma uhlobo lobudlelwano abalufunayo.
Ingabe Izinhlelo Zokuthandana Ziphephile?
Ngokuvamile, yebo, izinhlelo zokusebenza zokuphola ziphephile, kepha kusadinga ukuqonda nokuqapha. Izinhlelo zokusebenza zinezici zobumfihlo ezenzelwe ukusiza amalungu ukuthi aphume, njengokuqinisekiswa kwephrofayela. Amanye amawebhusayithi nawo ahlola abahlanganyeli ngesandla, enezela ungqimba olungeziwe lokuphepha kunqubo.
Abantu abafanele banikeze imininingwane eyimfihlo ngaphambi kokuhlangana nomuntu empilweni yangempela, njengesibongo sabo, ikheli, noma ngisho nomakhelwane wabo. Kuhle futhi ukuhlela usuku lokuqala endaweni yomphakathi. Ukuxhumana nomngani ngaphambi kwesikhathi futhi ubazise ukuthi bayahamba bayophola nomuntu ongamazi futhi akuyona into embi leyo.
Ungakuqinisekisa Kanjani Ukuphepha Kwakho Ngenkathi Uphola Ku-inthanethi?
Ungalokothi unikeze imininingwane yomuntu othile ku-inthanethi, ikakhulukazi ngaphambi kokuhlangana mathupha. Lolu lwazi lubandakanya isibongo, umqashi, ikheli, ngisho nomakhelwane.
Lapho uhlangana nanoma ngubani ku-inthanethi, hlela ukuthi izinsuku zokuqala ezimbalwa zenzeke ezindaweni zomphakathi. Lokhu kungaba ikhefi, ihhotela, inkundla yemidlalo yaseshashalazini, noma enye indawo yomphakathi. Gwema izindawo ezingazodwa njengamabhishi, futhi ungalokothi uvumele abantu ongabazi bangene endlini.
Ekugcineni, thintana nomngani ngaphambi kosuku ukubazisa ukuthi bakuphi futhi balindele nesikhathi sokubuyela. Bazise uma sekuyisikhathi sokuya ekhaya. Ukuhlinzeka ngesendlalelo esingeziwe sokuvikela, cela ukuthi bakushayele noma babhalele umbhalo phakathi nosuku ukuqinisekisa ukuphepha okuphezulu.
Iziphakamiso Zosuku Lokuqala
Ukuqomisana okokuqala kungaba nzima kakhulu! Ukuqinisekisa ukuphepha okuhle nokuhlangabezana nomdlalo mathupha, landela lawa macebiso:
Gcina ingqondo ivulekile. Abantu bangabukeka behluke kakhulu kumuntu kunangendlela abenza ngayo ku-inthanethi, ngakho-ke lungela izintandokazi ezizoshintsha.
Gwema ukwenza izinto ngokweqile. Ukusungula umhlangano wokuzijabulisa, njengosuku lokudla kwasemini, kuvumela abasebenzisi ukuthi bazane ngaphandle kokuzizwa bephoqelekile ukuchitha amahora ndawonye.
Buyekeza izingxoxo ngaphambi kokuya kosuku. Funda kabusha iphrofayili yomuntu bese ubukeza obekuxoxiwe, bese uhlela izihloko zengxoxo jikelele.
Kungenzeka Yini Ukuhlakulela Ubudlelwano Obubucayi Lapho Uphola Ku-inthanethi?
Yebo, kungenzeka! Uma abantu ababili behlangana, behambisana, futhi nekhemistri ikhona, ubudlelwano bungaphenduka bube yinto eqinile nephephile. Kwenzeka nsuku zonke, ngenxa yamasayithi afana ne-Eharmony.
Amasayithi Okuphola Ku-inthanethi Esiphethweni
Icebo lokuphola online ngelokuthi umuntu azi ukuthi yini ayifunayo futhi ayidingayo ebudlelwaneni ngaphambi kwesikhathi. Ngokuya ngohlu olungenhla, kunezinhlobo eziningi zobudlelwano ezitholakala kulawa masayithi.
Gcina ukuqaphela kepha ube nomqondo ovulekile lapho usebenzisa indawo yokuphola. Isiza ngasinye lapha sinokuthile esingakusiza, kuya ngokuthi umsebenzisi ufisa ini.
Vakashela tigersoftinder.com ukuthola ukuqhathaniswa komkhiqizo nokubuyekezwa okuningi.
Ukuzikhulula: Ulwazi alusona iseluleko noma isithembiso sokuthenga. Noma ikuphi ukuthenga okwenziwe ngokukhishwa kwabezindaba ngenhla kwenziwa ngokuzibeka wena engcupheni. Xhumana nomeluleki onguchwepheshe noma uchwepheshe ngaphambi kwanoma yikuphi ukuthenga okunjalo. Noma ikuphi ukuthengwa okwenziwe ngalesi sixhumanisi kuncike kwimigomo nemibandela yokugcina yokuthengiswa kwewebhusayithi okukhulunywe ngayo emthonjeni. Umshicileli wokuqukethwe nozakwethu bokusabalalisa abaphansi abazibopheli ngqo noma ngokungaqondile. Uma unezikhalazo noma izindaba ze-copyright ezihlobene nale ndatshana, xhumana nenkampani ngomusa lezi zindaba. Izixhumanisi eziqukethwe kulokhu kubuyekezwa komkhiqizo zingaholela ekuthumeleni okuncane kumbhali uma ukhetha ukuthenga umkhiqizo onconyelwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Izinhlelo zokusebenza eziyi-15 Zokuqomisana Okuhamba Phambili Kakhulu Zokuthola Ubudlelwano
Unethemba lokucwilisa izinyawo zakho emuva emhlabeni wokuphola ngemuva kwesikhathi eside sokuziqhelanisa nomphakathi? Uma ukufanisa nozakwethu omusha ongaba umlingani wakho "ngaphambi kwezikhathi" bekuyinkimbinkimbi — ukungeza ubhadane lomhlaba wonke kumxube kukwenze kwaba nzima ukuthola leyo nhlansi noma ukuxhumana. Ngalesi sikhathi esivamile esisha, ukudlala ngothando nezithandani ezingaba khona ngohlelo lokusebenza lokuphola online kungaba yindlela engcono kakhulu yokwazi othile.
Kepha iqiniso ukuthi, ukuphola online kungazizwa kukhungathekisa. Akudingeki nje ukuthi wenze izahlulelo ngokususelwa ezithombeni ezimbalwa naku-bios womugqa owodwa, noma ukungakhululeki kokuthumela imiyalezo eqondile (noma ama-DM) kubantu ongabazi ukuthi bazonikwa umoya. Inani elikhulu lezinhlelo zokusebenza nabasebenzisi lingenza ukuswayipha kalula kubonakale kungumsebenzi owesabekayo.
Eqinisweni, izilaleli ezithandanayo eziku-inthanethi kulindeleke ukuthi zikhule ziye kubasebenzisi abayizigidi ezingama-37.5 ngonyaka ka-2023, ngokusho kwedatha evela ku-Statista. Futhi ngo-2040, i-eHarmony ibikezela ukuthi amaphesenti angama-70 emibhangqwana izobe isiqale ubudlelwano bayo online. Kungenzeka wenze lelo zwe lokuphola lizizwe liphatheka, kepha-kufanele nje uthole uhlelo lokusebenza olufanele. Isibonelo, kukhona amapulatifomu we-niche ngokukhethekile kulabo abathanda ukulima , ubhekeni , noma ngisho nokushaya-intshebe (yebo, ngokujulile).
Ngakho-ke uma ufuna ukwenza ukuxhumana okubanzi no, yithi, umuntu ongaphezu kweminyaka engama-50, osanda kuphola ngemuva kwesehlukaniso, enethemba losuku lwevidiyo olubonakalayo, noma efuna ubudlelwano, lezi zinhlelo zokusebenza zokuphola online (ezinye, noma mahhala) zimboza konke izisekelo.
Umdlalo wuhlelo lokusebenza oludume kakhulu lokuphola online ezifundeni eziyi-17 ngokusho kocwaningo lwePCMag lwabantu abangu-2 000. Njengenye yezinsizakalo zokuphola ze-OG (isuswe kwiwebhusayithi kuphela kuya kuwebhusayithi nakuhlelo lokusebenza), iMatch inesikhalazo esithile kulabo abaphakathi kweminyaka engama-45 nengama-65 abafuna ubuhlobo obungathi sína; ucwaningo olwengeziwe olwenziwe yiSurveyMonkey luthole ukuthi amaphesenti angama-58 abantu abadala abaneminyaka engama-45-54 ubudala basebenzisa iMatch, ngaphezu kokuphindwe kabili kwephesenti abasebenzisa iTinder. Ungayilanda mahhala, yize lokho kuzokukhawulela ekuphequluleni; uma ufuna ukuthumela umyalezo kozakwethu abangahle babe khona, okubhaliselwe kuqala ku- $ 21.99 ngenyanga.
Izinhlelo zokusebenza zokujola akuzona ezezigidi zeminyaka kuphela; Amaphesenti angama-20 wabasebenzisi be-intanethi abaphakathi kweminyaka yobudala engama-55 kuya kwengama-64 basebenzise uhlelo lokusebenza lokuphola noma insizakalo, ngokusho kwe- poll evela kubuchwepheshe nakucwaningo lwenkampani iMorning Consult. I-OurTime iphendulela umqondo wokuxhuma isiko ekhanda layo; kunalokho, ukhuthaza abasebenzisi ukucinga ipeni pals, abangane, izinsuku, ngisho sekukudala kanye bomshado. Uhlelo lokusebenza lokulanda mahhala likuvumela ukuthi uthumele ama-imeyili, udlale ngothando, futhi uhambisane nabalingani ongaba nabo, futhi ukubhaliselwa kwe-premium ($ 38 ngenyanga) kuvumela ezinye izici ezinjengekhono lokubona ukuthi ubani othande iphrofayili yakho.
IBumble iyazihlukanisa nazo zonke ezinye izinsizakalo zokuphola ezigcwele esitolo sohlelo lokusebenza ngokudinga abesifazane ukuthi bathathe isinyathelo sokuqala uma umdlalo usenziwe. Uthola kuphela amahora angama-24 ukuthumela umlayezo, ngaphandle kokuthi utshale imali kubulungu be-Boost, obuqala ku- $ 10.99 isonto lonke. Abesifazane bayaluthanda uhlelo lokusebenza ngoba lunciphisa inani lemiyalezo engacelwanga, futhi abesilisa bayayithanda — empeleni, amaphesenti angama-58 abaphendulile abathanda iBumble kunhlolovo ye-PCMag bekungabafana — ngoba kuthatha ingcindezi ekuqaliseni. Futhi, uma usuthole umuntu onentshisekelo kuye, unenketho yokuya kudethi yevidiyo engaphakathi nohlelo.
I-Tinder kungenzeka yaletha "isiko lokuxhuma," kepha kusengenye yezinhlelo zokusebenza eziphezulu zokuphola e-US Inabasebenzisi ababalelwa ezigidini eziyisishiyagalombili, iningi lazo zonke izinhlelo zokusebenza zokuphola ezihlolwe yiStatista . Lokho kusho ukuthi unethuba elihle eliqinile lokuthi ekugcineni uzohambisana nomuntu ofaka intshisekelo yakho-noma ngabe kuthatha ukuswayipha okuningi kwesobunxele ukufika lapho. Uhlelo lokusebenza lumahhala, kepha ungafinyelela izici ze-premium ezifana neTinder Plus eziqala cishe ku- $ 9.99 ngenyanga.
5. Inala Yezinhlanzi
Enye original ukuphola amawebhusayithi-waphenduka-zokusebenza unombono maqondana ekutholeni ubuhlobo, POF kwadingeka ayizigidi ezingu-90 heydey yayo. Isasaziwa (iStatista ikubeke njengenombolo yesibili), futhi uhlelo lokusebenza luthi unamathuba aphindwe ama-2.7 okufaka ingxoxo emahoreni akho okuqala angama-24 kunezinye izinhlelo zokusebenza. Ngo zokuvota abasebenzisi bayo zesifazane, uhlelo lokusebenza yathola ukuthi amaphesenti angu-44 kwakungu-omama-futhi single ukuthi ukuthola amaphesenti umlingani 10 ngokushesha kunokuba umsebenzisi isilinganiso. Landa bese uswayipha mahhala, bese ubuyekeza ukuze ungeze izithombe eziningi noma ubonise kuqala kozakwethu abangahle baqale ku- $ 19.99.
Ngemuva kokugcwalisa uhlu lwemibuzo kanye nemiyalo yohlelo lokusebenza (cabanga ngemikhumbi ephihliza iqhwa efana nokuthi: “inhlama yami enkulu yezilwane ezifuywayo ngu…” nokuthi “ingoma yami yokuya karaoke ngu…”), iHinge izoqala ukukufanisa nabasebenzisi ababelana ngezinto ezifanayo. I-algorithm iphinde ikusebenzise ngemeshi yakho ethi “ Iyavumelana Kakhulu ” —usengozini yokuthi uphume nayo kasishiyagalombili, bathi. Futhi uhlelo lokusebenza alukhombisi nje ukuthi bangaki abantu abakuthandile, liphinde likutshele nokuthi bathande ini ngawe, okwenza kube lula ukuqala ingxoxo.
I-algorithm ye-OKCupid isebenzisa uchungechunge lwemibuzo ukuthola ukuthi iyiphi “iphesenti” ozoyifanisa nanoma ibaphi kubasebenzisi bayo abayizigidi ezinhlanu. Lokho kugxila okuqhutshwa ukuhambisana kukhanga ikakhulukazi kwabesifazane, abakha amaphesenti angama-58 abaphendulile abathanda lolu hlelo lokusebenza kwinhlolovo ye-PCMag. Ibuye ibandakanyeke kakhulu, inikezela ngobunikazi obungu-12 nobudlelwano bezocansi abangama-20 ukuze ukwazi ukuzichaza ngendlela ofuna ngayo futhi uqondanise ngqo nokuthi ufuna bani.
Ekuqaleni uhlelo lokusebenza lwe-Facebook, iZoosk manje ingenye yezindawo ezinkulu kakhulu zokuphola laphaya, ezinokulandwa okungaphezu kwezigidi ezingama-30 selokhu yethulwa ngo-2007. Namuhla, inabasebenzisi abakhuthele abangaphezu kwesigidi, ngokusho kweStatista — kanti abangu-500 000 kulabo bangamalungu akhokhayo, okusho ukuthi ngaphezu kwengxenye yabasebenzisi bazibophezele ngokujulile ekutholeni umdlalo. Esikhundleni sokukuphoqa ukuthi ugcwalise uhlu lwemibuzo olude, amanothi we-algorithm ohlelo lokusebenza osebenzisana nawo ukuze unikeze kangcono ukufana okungahle kube khona.
Ngalesi sikhathi, i-eHarmony yigama lasekhaya. Isincintisana kakhulu noMatch, futhi amaqembu amabili amakhulu ngobudala aneminyaka engama-30 ukuya kwengama-44 kanye nama-55- kuya kwengama-64 ubudala. Inqubo yokubhalisa-efaka uhlu lwemibuzo olunemininingwane eyi-150-luhambo, kepha uphawu lwake lwathi lunesibopho sokwakha imishado engu-4% e-US Plus, amalungu okubhaliselwa kwe-premium anokukhetha ukuya ku usuku lwevidiyo ngaphambi kokuhlangana mathupha.
10. Ikhofi Lihlangana neBagel
Nsuku zonke emini, iCofi Ihlangana neBagel izokhipha futhi ikuthumele ukufana kwekhwalithi - noma "ama-bagel" njengoba bewabiza kanjalo-akhethwe yi-algorithm yayo. Ngaphandle kokuswayipha okuhilelekile nokukhethwa okulinganiselwe kwansuku zonke, lolu hlelo lokusebenza lwenzelwe ukungadluli. Futhi, amaphrofayili ajulile nemibuzo ye- "ice-breaker" ikhuthaza ingxoxo ezuzisayo, okwenza lolu hlelo lokusebenza luphelele kulabo abafuna ukuqala ubudlelwano obubucayi.
Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-14, i-Hily imele "Sawubona, ngiyakuthanda!" Uhlelo lokusebenza lusebenzisa i-AI ukuqhubeka nokwenza ngcono ukufanisa, futhi inezici ezifana nezindaba ze-Hily ukukusiza ukuthi ubambe kangcono ukuthi ungubani. Uhlelo lokusebenza lumahhala, ngokubhaliselwe okungakhethwa komuzwa ongenazikhangiso nemodi ye-incognito.
Uma ufuna abalingani abangabodwana abaMnyama ababelana ngezintshisekelo zakho, i-BLK uhlelo lokusebenza lokuphola olukhethekile ekutholeni lokho kuxhumana emphakathini wabo wabasebenzisi. Ngokulandwa okungaphezu kwezigidi ezi-4, uhlelo lokusebenza lwamahhala likuvumela ukuthi uqondanise futhi uxoxe nabalingani ongaba nabo. Noma, thuthukela ebulungwini be-premium ($ 10 ngenyanga) ukuze uthole okuhlangenwe nakho okungenazikhangiso, iphrofayili ekhulisiwe, inani elingenamkhawulo lokuthandwa, kanye nekhono "lokubuyisela emuva" ngokunikeza umuntu ithuba lesibili.
Uthathekile yilowo makhelwane omuhle kepha awazi igama lakhe? Njalo ubheke umuntu emehlweni ngenkathi uhamba nenja yakho kepha ungakaqali ingxoxo? I-Happn uhlelo lokusebenza lokuphola olungasiza ukwenza lokho kuxhumana okubonakala kulahlekile kube ngokoqobo. Ngokusebenzisa indawo efonini yakho, ungafanisa nabantu futhi kuhlelo lokusebenza abaseduze. Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-100 emhlabeni wonke, kungenzeka ukuthi ungathola nje ukuchobozwa komakhelwane bakho.
Idalwe ngabesifazane be-queer, lolu hlelo lokusebenza lwe-LGBTQ + lokuqomisana (kanye nenkundla yezenhlalo) eyabesifazane nabantu abangabhalisi abafuna ukuthola uthando endaweni ephephile. Kubasebenzisi babo abayizigidi eziyisithupha, uHER uhlinzeka ngemiphakathi engaphakathi nohlelo nemicimbi ebanjelwe ukusiza ukukhuthaza lezo zinhlansi ukuba zindiza.
15. Umbuthano Wangaphakathi
Uma uzimisele ngokuthola enye ingxenye yakho futhi ufuna ukugwema ukuswayipha kungenzeki, i-Inner Circle idinga ukuthi bonke abasebenzisi bamukele i- "The Date Better Pledge" echaza ukuzibophezela "kokuhlonipha, ukuthembeka nokubandakanya wonke umuntu." Uhlelo lokusebenza luhlinzeka ngamaphrofayli anemininingwane, izihlungi ezihlukile, nemiyalo yengxoxo-ukuze ukwazi ukugwema imiyalezo esabekayo ye-liner eyodwa "hey".
Izinhlelo Zokuqomisana ezihamba phambili zokwenza lokhu kube unyaka wothando
Wonke umuntu uyazi umuntu ohlangane naye "umuntu ongunaphakade" noma kunjalo ukuphola online kepha njengokuzijwayeza uqobo, ukuthola isiza esifanelekile kungathatha iphutha. IKochava Collective, eyengamele imakethe yedatha yeselula emikhulu kunazo zonke ezimele, yazigaxa izinombolo ukuze income amasayithi ambalwa ngokususelwa kwinani labasebenzisi. "Sinemininingwane etholakalayo kumadivayisi angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane eziyi-7.5," kusho uJake Courtright, umphathi weKochava. “Njengengxenye yale setha yedatha, sinemininingwane ye-'app graph 'kulawa madivayisi, okuluhlu lwama-app afakwe kulawa madivayisi. Sibheke zonke izinhlelo zokusebenza ezinkulu zokuphola ku-Google Play nezitolo zohlelo lokusebenza, sabe sesithola izinhlelo zokusebenza ezinhlanu ezinokufakwa okuningi ngaphakathi kwedatha yethu. ”
Kepha ngoba akusithina sonke esenza izinqumo ngokususelwa ezinombolweni zodwa, futhi sihlanganise lolu hlu ngezinye izinketho ezimbalwa ezingahambisana nesimo sakho. Okunye kwalokhu kuhlinzekela abantu be-LGBTQ +, abasebenzisi beminyaka ethile, abasebenzisi abaMnyama noma be-BIPOC, labo abanezintshisekelo ezithile ezifanayo nabanye okungenzeka bangalutholi usuku lwabo oluhle kolunye lwezinhlelo zokusebenza ezidume kakhulu. Noma ngabe ufuna i-fling evamile, isaphulelo sokuthola ukuhlukana noma ubudlelwano bakho besikhathi eside, ungaqala ngokulanda enye yalezi zinhlelo zokusebenza zokuphola.
Uma ngabe uku-inthanethi nhlobo, cishe uyazi ngeTinder. Ngokuya ngeKochava Collective, uhlelo lokusebenza lunenani eliphakeme kakhulu labasebenzisi bazo zonke izinhlelo zokusebenza zokuphola laphaya. Ngenkathi abasebenzisi abaningi bephendukela kuTinder ukuthola ukuhlangana okungajwayelekile, abanye bathole uthando lwe-longterm lapha.
Ku-Bumble, abesifazane yibo abathola ukuqala ukuxhumana. Vele, ukuthi yibuphi ubulili obenza isinyathelo sokuqala akuyona inkinga yabesifazane be-LGBTQ +, kepha izintokazi ezifuna ama-dudes zingakuthola njengomoya womoya omusha. UKochava uthi iningi labasebenzisi bayo nalo liwela ebangeni lobudala elineminyaka engama-26 ukuya kwengama-35, ngakho-ke ama-daters amancane nawo angakuthanda lokho.
Noma ngubani oke waba semdlalweni wokuphola isikhashana mhlawumbe uzwile nge-OkCupid, ebilokhu ikhona kusukela ngo-2004. I-OG manje inohlelo lokusebenza olunemibuzo yalo yesiginesha mayelana nakho konke kusuka enkolweni kuya kumantongomane butter vs jelly ukukusiza uthole umlingani wakho ophelele.
Kuzinhlelo zokusebenza ezifakwe nguKochava, lena ibinomsebenzisi omncane kunabo bonke ngemuva kweBumble, enabasebenzisi bayo abangaphezu kwesigamu abangena ngaphansi kweminyaka engama-36. Futhi, ngokuvumelana negama layo, isayithi lizisholo ukuthi lingelinye lamapulatifomu wokuphola amakhulu kunawo wonke emhlabeni .
Abasebenzisi abanemigqa embalwa yokuhleka kanye nemicu yesiliva bangathola imimoya yezihlobo kuhlelo lokusebenza nabantu abaningi kubantu babo. Imininingwane kaKochava ikhombisa ukuthi iningi labasebenzisi beMeMeMe bakububanzi beminyaka engama-46 kuya kwengama-55 ubudala, kulandelwa eduze kubakaki abangama-55 kuye kwangama-65.
Ngaphezu kokuba nesisekelo somsebenzisi esibanzi, uKochava uphawula ngaleyo ndlela abafana abaningi kunabesifazane abalanda i-Happn, uhlelo lokusebenza lokuphola olususelwa endaweni. Abesifazane abafuna ama-gents, kwangathi amathuba okuba ahlale ekuvuna.
Izinhlelo Zokusebenza Zokuthandana Okuhamba phambili
Abahleli bethu bacwaninga ngokuzimela, bahlola, futhi bancoma imikhiqizo ehamba phambili; ungafunda kabanzi ngenqubo yethu yokubuyekeza lapha. Singathola amakhomishini ngokuthenga okwenziwe kuzixhumanisi zethu esizikhethile.
Luis Alvarez / Getty Izithombe
Ukungena ezweni lezinhlelo zokusebenza zokuqomisana kungakucindezela, ikakhulukazi uma ungaqiniseki ncamashi ukuthi ungalanda ini. Ezinye izinhlelo zokusebenza zenzelwe ubudlelwano besikhashana, kanti ezinye zikhuthaza ukwazana ngempela ngaphambi kokuhlangana nekhofi noma i-FaceTime ikhofi. Noma ngabe ufuna ukubhekela phansi iphasishi noma i-fling nje, kunensizakalo ekufanele.
Lapha siqoqe izinhlelo zokusebenza zokuphola ezinhle kakhulu, ukuze uhlangane nomeshi wakho — noma ngabe owasebusuku noma waphakade.
Izinhlelo Zokuqomisana ezihamba phambili ze-2021
Okuhamba phambili sekukonke: ihenjisi
Okuhle Kakhulu Komshado: Umdlalo
Okuhamba phambili ngokukhethekile: Raya
Okuhle kakhulu ngezinsuku zokuqala: Bumble
Khipha ku-internet LGBTQ Ukuqomisana App: HER
Okuhamba phambili kokuqomisana kwamaJuda: JSwipe
Okuhle kakhulu kokuqomisana okungajwayelekile : iTinder
Okwenza Sikukhethe: I- Hinge ikunikeza inani elilinganiselwe lokuxhuma ngosuku, okwenza kube inketho engcono kubantu abafuna ubudlelwano obubucayi.
Wabelana ngolwazi oluthe xaxa ngabantu, kufaka phakathi ukuthandwa nokungathandwa
Uzizwa egxile kakhulu ezingxoxweni ezinengqondo nokwakha ubudlelwano
Inikeza kuphela inani elilinganiselwe lemeshi ngaphandle kokuthi ukhokhele ukuthuthukisa
Ufuna abantu bakhokhe ukunikeza umentshisi i- "rose," okwenza uhlelo lokusebenza ludide kancane
I-Hinge iqale njengendlela yokuxhuma abangane babangani nabantu kunethiwekhi yakho. Lapho lusungulwa ngu-CEO u-Justin McLeod, uhlelo lokusebenza lukhombise abantu amaphrofayli asuselwa ekusondeleni kanye nakubangani be-Facebook ababelana ngokufana. Manje, imane ixhumanise abasebenzisi nabantu abaseduzane nomakhelwane abawukhethile.
Abasebenzisi bangakhetha ukuxhumana nomuntu ngokuthepha inkinobho yengxoxo nokufanisa noma ukushiya amazwana ekhasini. Amaphrofayli anikela ngemiyalo yokwenza ingxoxo iqale njengokuthi “Uma ukuthanda lokhu akulungile, angifuni ukuba neqiniso…” nokuthi “Into eyodwa engingathanda ukuyazi ngawe….”
I-Hinge ikukhombisa imininingwane engaphezulu ngabantu, ngakho-ke uma ungakhululekile ukuhlangana nabantu ongabazi abavela ku-inthanethi, lokhu kwenza kube lula. Kukunika izibongo zabantu futhi imvamisa indawo yangakubo, ubudala, ubude, umsebenzi, idolobha lakubo kanye nekolishi.
Uhlelo lokusebenza lumahhala kepha lufuna abantu bakhokhe, ubacela ukuthi bakhokhele ama "rose" wangempela enzelwe ukufana okuvelele insizakalo ekukhethele yona ngokuya ngalokho okufunayo. Konke kuzwakala kakhulu njengesiqephu se- The Bachelor . Ama-algorithm akhethwa nsuku zonke womdlalo wakho omuhle nawo awusizi. Izikhathi eziningi bazokhetha umuntu okude kakhulu noma onobumbano lwezepolitiki oluhluke kakhulu. Kwezinye izimo, bangahle bakukhombise umuntu osuvele umazi ongangakhululeki kancane.
Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza lapho kufanele nobabili nivume ukufana ngaphambi kokuthunyelwa komyalezo, abantu abakuHinge bangakuthumelela umyalezo wokuvula ukuze ingxoxo iqhubeke. Ngenkathi kumahhala, kukhona nenguqulo ekhokhelwayo. Ubulungu obukhethwayo bungamadola angama-30 ngenyanga, ama-dollar ayizinyanga ezingama-60 izinyanga ezintathu, noma ama- $ 90 izinyanga eziyisithupha futhi ikuvumela ukuthi uthumele izixhumanisi ezingenamkhawulo futhi usethe izihlungi eziqinile.
Isizathu Sokuba Sikhethe: Sikhethe uMeshi ngoba kuyindlela engcono kakhulu yama-daters abucayi anengqondo yomshado.
Amalungu afuna kakhulu ubudlelwano noma umshado
Inika abasebenzisi imininingwane ebanzi mayelana nokufana okungahle kube khona
Inketho yamahhala inika abasebenzisi ukubuka kuqala kuphela, bengenayo indlela yokufinyelela ukufana noma imilayezo
Ngoba uhlelo lokusebenza olukhokhelayo, abasebenzisi baluthatha ngokungathi sína kakhulu
Ungaqala ingxoxo ngokukhetha Izipho zomdlalo kuwe
Umeshi ukulinda okudala ngesizathu. Ngoba abasebenzisi kumele bakhokhele ubulungu, kusho ukuthi abantu abajoyina bagxile ekuzibophezeleni. IMatch.com yasungulwa nguGary Kremen noPeng T. Ong eSan Francisco ngo-1993. Kusukela lapho, iye yahlala ithandwa, ikakhulukazi kubantu abafuna ubudlelwane obubucayi.
Lapho ubhalisa, ufaka igama lakho, ubudala, ubude, ukuthi ufuna izingane noma cha, ungashadile kangakanani nokuthi ubhema yini. Ube usuphendula umbuzo othi "Yini ekwenza ujabule kakhulu?" ukukhetha ezintweni ezibandakanya amakhonsathi, ukupheka, ukubhloga, imibukiso yokubukela kakhulu, ezemidlalo, nokuningi. Okulandelayo, ukhetha okufunayo kuzakwethu, kufaka phakathi ibanga leminyaka, ibanga lokuphakama, inkolo, nokuthi lezo zihloko “kumele ube nazo” noma cha.
Ngenketho yamahhala, amalungu athola imilayezo elinganiselwe kusuka "ekukhetheni kwabo okuphezulu" uMatch abakhethele kona ngokuya ngokuhambisana. Inketho ye-premium ivumela amalungu ukuthumela imiyalezo okungenamkhawulo, ukuthandwa, amandla okubona wonke umuntu okuthandayo futhi obuke iphrofayili yakho, izinkulumo zomuntu ngamunye nesazi sokuphola, nokuningi.
Ngeshwa, uma unentshisekelo yokusebenzisa iMatch, kuzofanele ukhokhe; ngaphandle kwalokho, awukwazi ukubona ukuthi ngubani okuthumela imilayezo noma ukuthi bathini. Ubulungu bubiza cishe u- $ 18 njalo ngenyanga ngohlelo lonyaka, cishe u- $ 22 njalo ngenyanga izinyanga eziyisithupha, futhi cishe u- $ 30 izinyanga ezintathu.
Isizathu Sokuba Sikhethe: U- Raya udume ngokuba uhlelo lokusebenza olukhethekile lokuphola olujwayelwa osaziwayo nabathonya.
Amalungu ayahlonipha futhi ayathakazelisa
Ukuba wedwa kohlelo lokusebenza kwenza kube mnandi kakhulu futhi kukhange
Kuyajabulisa ukubona osaziwayo abaphola amaphrofayili
Amalungu kufanele akhokhele ukuthandwa okuningi kwansuku zonke uma efinyelela umkhawulo wabo wosuku
Kusebenza kuphela kuma-iPhones
URaya udume ngokuba ngolunye lwezinhlelo zokusebenza ezikhethekile kakhulu zokuphola, etusa u-A-listers kanye nabathonya njengamalungu. Ngoba kumenywa kuphela, kunenqubo yokufaka isicelo, futhi abantu kufanele bakhokhe ukuze babe ngamalungu, kunesikhalazo sekhwalithi ephezulu kuso kune-app ejwayelekile.
I-Raya icishe ibe ngu- $ 7 njalo ngenyanga futhi ungaswayipha ngokusebenzisa abantu emhlabeni wonke. Uma ufinyelela ukuthandwa kwakho kwansuku zonke, ungakhokha cishe ama- $ 7 ngokuthandwa okungaphezulu kwansuku zonke okungu-30, noma ungavele uxoxe ngokuxhumana kwakho kwamanje, uhlelo lokusebenza olunxusa ukuba ukwenze. Lapho usuyilungu, unganikeza abangani ithuba lokudlula lomngani elingasiza ukusheshisa ukungena kwabo, noma ngabe uhlelo lokusebenza lunelungelo lokwenqaba izinhlelo zokusebenza.
Amalungu atholakala emhlabeni wonke futhi ajwayele ukusebenza emikhakheni yokudala. Ngokuyisisekelo yiSoho House yokuphola. Ungaxhuma i-akhawunti yakho ye-Instagram, ukhethe ingoma, wenze umbukiso wesilayidi wezithombe, futhi ungasesha ukuxhumana kothando noma abangane. Ungaphinda useshe ngendawo ukuze ubone ukuthi ubani oseduze kuhlelo lokusebenza. URaya uzokukhombisa futhi ukuthi yibaphi abangane enifana ngabo uma nobabili ninenombolo yocingo yomngane womunye nomunye, ngakho-ke ungahlala ubuza pal wakho uma beqinisekisa usuku lwakho olungaba khona. Futhi ungasesha amalungu edolobheni elithile noma embonini ethile, okwenza kube lula ukuxhumana noma ukuhlangana nabantu.
Isizathu Sokuba Sikhethe: IBumble inomqondo oyingqayizivele: Abesifazane bathumela umlayezo kwabesilisa kuqala bese banikezwa amahora angama-24 okuphendula, okwenza kube uhlelo lokusebenza oluqhutshwa ngabesifazane.
Kulula ukuxhumana nabantu abaningi ngasikhathi sinye
Abesifazane bathumela umyalezo kuqala ukuze bakwazi ukukhetha isihloko
Indawo-based ukuze ubone ukuthi ubani oseduze kwakho uma useholidini noma edolobheni elisha
Abesilisa bangaphendula kalula ngezindlela ezingathandeki futhi kunokuhlukunyezwa okuningi
Amadoda amaningi awabhalisi imininingwane eminingi ngabo
Unesikhathi esilinganiselwe sokusebenzisa isivuli, ngakho-ke kufanele uhlole uhlelo lokusebenza njalo
Ngenkathi iBumble iqalwa ngumsunguli wesifazane uWhitney Wolfe ngo-2014, kwakususelwa emcabangweni wokuthi abesifazane bazothumela umyalezo kuqala, okusho ukuthi bangakhetha ukuqala ingxoxo futhi balawule ukulandisa. UWolfe uqhubekile wenza uhlu lweForbes 30 Under 30 kanjalo nohlu lweTime 100 waba ngowesifazane omncane kunabo bonke ukuthatha inkampani emphakathini eneminyaka engama-31 kuphela.
Kusetshenziswa iBumble kulula. Yenza iphrofayili ngezithombe zakho nolwazi olumayelana nawe, bese ungaba nohlelo lwamahhala noma ukhokhele ezinye izinketho. Uhlelo lwe- “Spotlight” luthembisa ukufana okuphindwe kayishumi futhi likubeka ngaphambili kolayini imizuzu engama-30 ukuze amameshi akho ongaba nawo akubone kuqala. Ungakhokha cishe u- $ 1 ngamalambu angama-30, noma cishe u- $ 6 ngokukhanya okukodwa. Noma ungathola amalambu angama-30 cishe ngama- $ 50.
Enye indlela iSuperSwipe, ethi uzothola “izingxoxo ezingafika kwezingu-10x ngaphezulu.” Ama-SuperSwipe akuvumela ukuthi uthandeke kakhulu njengomuntu, ngakho-ke lapho beqala ukuswayipha, uzoba ngomunye wabantu bokuqala abababonayo. Kumayelana ne- $ 1 yama-SuperSwipe angama-30 kanye ne- $ 3 ngayinye kuma-SuperSwipe amabili. Uma ungazizwa uthanda ukukhokhela lezi zinketho ezimbili, ungabuye uthuthukise i-akhawunti yakho ibe yi-premium ukuze uvule zonke izici ngasikhathi sinye. Abasebenzisi be-Premium bathuthukisa cishe u- $ 18 bese bethola ukuthandwa okungenamkhawulo, izihlungi ezithuthukile, imodi yokuhamba ukubona ukuthi ngubani oswayipha ezindaweni ezithile, nokubuyela emuva okungenamkhawulo uma kwenzeka uswayipha ngendlela engafanele kothile, phakathi kwezinye izici eziningi.
IBumble iyindlela enhle yokuthi umuntu aqale phansi ofuna ukubona bonke abantu abafanelekile abaseduze. Kufanele uswayiphele kwesokudla ukufanisa nabantu, bese unamahora angama-24 ukwenza isinyathelo sokuqala futhi uqale ingxoxo, ngakho-ke kufanele uhlole uhlelo lokusebenza njalo, uma kungenjalo ukufana kuzophelelwa yisikhathi. Amadoda abe namahora angama-24 okuphendula. Ungasesha uhlelo lokusebenza ngezihlungi, ukhethe ukuthi unentshisekelo kubani (abesilisa, abesifazane, noma wonke umuntu), ibanga leminyaka, nebanga. Ungasetha futhi izihlungi ezithuthukile, ubheke ukuphakama okuthile, uphawu lokufundwa kwezinkanyezi, isizinda semfundo, nokuningi.
Okuhle kakhulu kwe-LGBTQ Ukuqomisana: HER
Kungani Sikhethe: Sikhethe yena ngoba uhlelo lokusebenza olukhulu lokuphola lwamahhala lwe-LGBTQ emhlabeni.
I-HER uhlelo lokusebenza olukhulu lokuphola lwamahhala lwabesifazane abathandana nabesilisa nabesifazane
Uhlelo lokusebenza labelana ngezindaba ze-LGBTQ + nemicimbi yasendaweni eyenzekayo, enikeza izikhala eziphephile
Abantu bakhala ngokuthi eminye imibhangqwana ifuna ama-threesomes kuhlelo lokusebenza
Uma ungakhokhi, kufanele ulinde amahora ukuze uthole amanye ama-swipe
I-HER uhlelo lokusebenza olukhulu kakhulu lokuphola lwamahhala lwabesifazane abasebenza kahle, olunikeza amandla okufanisa, kanye nokunikeza izindaba ngokuhlangana kwasendaweni ezindaweni eziphephile. Uhlelo lokusebenza lusebenza njengomphakathi futhi luzama ukwamukela nokusekela.
Ngokufana ne-Tinder, i-HER imayelana nokuswayipha. Ukuswayipha kwesobunxele kusho ukuthi awunantshisekelo nomuntu, ngenkathi ukuswayipha kwesokudla (noma inhliziyo ye-emoji) kusho ukuthi ungathanda ukwazi lowo muntu. Ngemuva kwalokho, lowo muntu anganquma ukuthi lowo muzwa uyavumelana yini futhi akuthumele umlayezo.
Ngenkathi kumahhala, kunezinhlobo ezintathu zobulungu bokubhaliselwa kwe-premium. Ubulungu be-premium, benyanga eyodwa buqala cishe ku- $ 15, izinyanga eziyisithupha cishe kungama- $ 60 futhi unyaka owodwa cishe kungama- $ 90.
Isizathu Sokuba Sikhethe : IJSwipe iyindlela enhle yokuthi abantu abangamaJuda baswayiphe futhi bahlangane, noma ngabe basuselwa kuphi.
Amandla okuhlangabezana nezingoma zamaJuda kalula
Ukuhlelwa kohlelo lokusebenza kwenza kube nzima ukubona ukuthi abantu basuselwa kuphi noma baswayipha basuka kuphi
I-JSwipe iyindlela enhle uma ungumJuda noma ufuna ukuphola amadoda noma abesifazane abangamaJuda. Yethulwe ngo-2014 ngePhasika ngumsunguli uDavid Yarus, owayesebenzela i-Birthright Israel no-Hillel ngaleso sikhathi, uhlelo lokusebenza olususelwa eBrooklyn laphinde lwatholwa yimbangi yalo, i-JDate.
Ku-JSwipe, ufaka i-bio emfushane, imfundo yakho, nobudala bakho. Uyacelwa futhi ukuthi ugcwalise ukuthi ugcina i-kosher nehlelo lakho noma cha. Ngemuva kwalokho, ungaqala ukuswayipha. Ikhasi lakho lephrofayili lixhumene nekhasi lakho le-Facebook, ngakho-ke lizokukhombisa ukuthi yiziphi izintshisekelo ohlanganyela ngazo nemidlalo ngokuya ngalokho owawukuthanda ngaphambilini ku-Facebook.
I-JSwipe inikeza inguqulo yamahhala, kanye nobulungu besigaba sokuqala, lapho ungaya emicimbini ekhethekile futhi uthole izinzuzo ezifana neziphuzo zamahhala nokuthengisa. Uhlobo olukhethekile futhi likuvumela ukuthi ubone ukuthi ubani othande iphrofayili yakho, wandise iphrofayili yakho ngokufana okuningi, swayipha
Ubulungu benyanga eyodwa bungaba ngama- $ 25, izinyanga ezintathu zibiza cishe ama- $ 45, kanti ubulungu bezinyanga eziyisithupha cishe bungu- $ 60. Ngokufana neTinder, ikukhombisa ukuthi ngubani oswayipha okuzungezile ngokususelwa endaweni, kepha futhi ungasetha irediyasi emayela kakhulu futhi ubone ama-singles emhlabeni wonke.
Okuhle kakhulu kokuqomisana okungajwayelekile: iTinder
Okwenza Sikukhethe: Awukwazi ukungazinaki uhlelo lokusebenza lokuqala lokuphola, iTinder, olwavusa iswayipha. Ilungele ukuhlangana noma ukuphola isikhathi eside.
Ilungele ukufaka isithupha sakho emhlabeni wokuphola online
Kulula ukuzulazula, ikakhulukazi kwabaqalayo bohlelo lokusebenza lokuphola
Enye yezinketho ezingakahleleki ebhekiswe kakhulu kuma-hook-ups
Kugcizelela izinketho ezingapheli ohlangabezana nazo ngenkathi uswayipha
I-Tinder ngempela uhlelo lokusebenza olukuqale konke. Yethula ngo-2012 futhi yaguqula indawo yezithandani unomphela, yethula abodwa ezweni lokuswayipha kwesobunxele noma kwesokudla ukufanisa nabantu abangahle balele embhedeni noma abanye ababalulekile.
Futhi ngenkathi bekuvame ukuba nabantu abaningi abafuna zonke izinto ezahlukahlukene, manje sekuqondiswe kakhulu ekuthandaneni okungajwayelekile. I-Tinder mhlawumbe ingcono kakhulu edolobhaneni elincane lapho kungekho khona abantu abaningi kuzinhlelo zokusebenza ze-niche kepha kepha uyazi ukuthi abantu bafuna amalungiselelo angahlelekile ngokwengeziwe.
Ngenkathi iqala njengohlelo lokusebenza lwamahhala ngokuphelele, manje kunenketho yamahhala nekhokhelwayo evumela abasebenzisi ukuthi "bathande kakhulu" abantu (ifomu elengeziwe lokuthopha okusolakala ukuthi liphindwe kathathu amathuba akho omdlalo), sebenzisa isici sepasipoti ukubona ukuthi ngubani ophumile lapho kwezinye izindawo, bese ubona ukuthi ngubani okuthandile ngaphambi kokuthi uswayiphe kubo. I-Tinder Gold inika abasebenzisi konke lokho nokuningi cishe ngama- $ 15 ngenyanga, kuyilapho iTinder Platinum inika abasebenzisi lezo zinketho kanye nokukwazi ukuthumela umuntu umyalezo ngaphambi kokufanisa cishe u- $ 10 njalo ngenyanga izinyanga eziyisithupha.
Ukulanda uhlelo lokusebenza lokuphola kungabonakala njengokuzibophezela okukhulu futhi uzizwe ukhungathekile uma ungaqiniseki ukuthi uzozama ini kuqala, ngoba onke anama-vibes ahluke kakhulu. I-hinge iyindlela engcono kakhulu uma ubheka ukuthola okungathí sina ngokujola kohlelo lokusebenza. Ikunikeza imininingwane eminingi mayelana nezinsuku ezingaba khona futhi ikhuthaza izingxoxo ezizuzisayo. I-Raya ilungile uma unethemba lokuthola usaziwayo noma ufuna ukuxhumeka nabanye abadali abacabanga njengaye, kepha kungaba nzima ukuthola isimemo kuyo.
IBumble yinhle uma unethemba lokuya ezinsukwini eziningi zokuqala. Uhlelo lokusebenza alukutsheli okuningi ngabantu, kepha lwenza kube lula ukuswayipha ngokungapheli bese uqala ukuxoxa. Cabanga ngakho njengokuhlangana nomuntu endaweni yokucima ukoma ngokunganaki. Uma ufuna ukuphola nabesifazane futhi ufuna uhlelo lokusebenza kuphela lokho, HER ukubheja kwakho okuhle kakhulu. Futhi uma ufuna ukuyigcina ikhululekile, uTinder ukuthembeka okudala ngesizathu.
Zisebenza Kanjani Ukuqomisana Izinhlelo Zokusebenza?
Ezinye izinhlelo zokusebenza zidinga ukuthi zombili izinhlangothi ziswayiphele kwesokudla uma zinentshisekelo bese zikuvumela ukuthi uxhume. Abanye bavumela umuntu oyedwa athumele umyalezo, bese umamukeli anganquma ukuthi bafuna ukuphendula noma cha. Izinhlelo zokusebenza ezimbalwa zinikeza imininingwane ebanzi, kufaka phakathi ikolishi, ukuphakama, nokuthi abantu bafuna izingane noma cha, kanti ezinye zizokukhombisa ozakwethu abaseduze ngaphandle kolwazi oluningi.
Ingabe Kukhona Izinketho Zamahhala Nezikhokhelwayo Zokuqomisana Nezinhlelo Zokusebenza?
Izinhlelo zokusebenza eziningi zokuphola zikhululekile, noma okungenani zinenketho yamahhala kanye ne-premium, inketho ekhokhelwayo. Inketho yamahhala imvamisa inika abantu ithuba lokuswayipha, ngenkathi ukukhokha kuvumela abantu ukuthi bakhethe kakhulu, ukusetha izihlungi ezibonisa ukuphakama okuthile, inkolo, noma ukuzibandakanya kwezepolitiki, ngokwesibonelo. Kuzinhlelo zokusebenza eziningi, kulula kakhulu ukuzilanda bese usebenzisa inguqulo yamahhala ngaphandle kokuthi ufuna okuthile okuhle kakhulu. Ezinye izinhlelo zokusebenza, njengeRaya, zidinga ukuthi bonke abasebenzisi bakhokhe imali encane yenyanga. Imvamisa, imali iba ngaphansi uma ukhokha izinyanga ezimbalwa noma ngaphezulu.
Zibiza Kangakanani Izinhlelo Zokuthandana?
Ukujola kwezinhlelo zokusebenza kusuka kokumahhala kuye cishe ku- $ 100 uma uthola inguqulo ye-premium futhi utshale ezinyangeni ezimbalwa zayo. Izinketho ezingabizi kakhulu zizokunikeza uhla lweminikelo ye-premium ethuthukisa iphrofayili yakho, noma ikubeke ekukhanyeni kwemidlalo engaba khona noma ikunikeze ithuba lokuthumela umlayezo kothile ngaphandle kokufanisa kuqala.
Sibuze ochwepheshe mayelana nezinhlelo zokusebenza, safunda izibuyekezo, futhi sahlola iminyaka yethu yolwazi sizisebenzisa. Siphinde safuna izinhlelo zokusebenza ezinikeza ulwazi olubanzi mayelana nabanye, kanye nokuguquguquka uma kukhulunywa ngezinhlelo zokukhokha. Kwakubalulekile kithi ukwethula izinketho ezahlukahlukene zokuthandwa kwezithandani, noma ngabe kungokuxhumana okungajwayelekile, izinsuku zokuqala, noma ngisho nomshado. Ukubandakanywa futhi bekuyinto ebalulekile ekunqumeni izinketho zethu, ngakho-ke izinhlelo zokusebenza ezilungiselela izinkomba ezahlukahlukene zocansi nezinkolo zenze uhlu.